MMM – Mudon Maung Maung
Auto Parts Sales & Distribution
Agriculture & Mechanization Logistics
WELCOME TO MUDON MAUNG MAUNG CO., LTD.
“Prestigious Image” of our corporation
“Diversified Quality” of our services
The concerted collaboration of “The Citizens and the State” should be the fundamental pillar to build and implement the local entrepreneurial business starting from the smallest to the gigantic corporations in order to keep pace with the highly industrialized nations of the world.
Since 1992, we launched our action plan into executing the objectives of our Mudon Maung Maung Group of Companies. Since then, for serving the interest of our nation, we did our part for generating career opportunities for the local people only to render our aids in national-building tasks.
Mudon Maung Maung, our company, has outstretched to stand as one of the leading companies among the diversified industries starting fromasmall start-up business with approximately ten employees intoabigger one.
At the present time, our firm has been operating six principal business units comprising over 1000 permanent employees, technicians, scholars and administrative experts.
This is to declare that we have already gained ground staunchly with the aids of loyal clients, the support of our stakeholders as well as our sincere endeavor and expertness in technology.
The principal credo of our corporation is “making our customer fully satisfied with our service”, to promote our service quality, to increase the employees’ performance and to make the future of our company sustainable to raise status of employee’s life creating safe environment and to make the brand name of our company more prestigious in the certain future.
We are rendering our contribution of CSR activities towards the all-round development of our nation’s interests and the well-beings of our citizens as much as we could.
AUTO PARTS SALE CENTER
Mudon Maung Maung2021-06-22T14:56:37+06:30September 9th, 2019|
မုဒုံမောင်မောင် ကားပစ္စည်းအရောင်းစင်တာ (သုဝဏ္ဏဆိုင်ခွဲ)၏ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုယနေ့နံနက်ပိုင်းမှာမင်္ဂလာရှိစွာဖြင့်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ကြွရောက်အားပေးချီးမြှင့်ခဲ့ကျသော ဧည့်သည်တော်များနှင့်တကွ ဝယ်ယူအားပေးခဲ့ကြသည့်မိတ်ဆွေများအားလုံးကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဖွင့်ပွဲအထိမ်းအမှတ်အဖြစ် လာရောက်ဝယ်ယူအားပေးကျသော လူကြီးမင်းများအား လက်ဆောင်များပြန်လည်ပေးသွားမည့်အစီအစဉ်လဲရှိနေတဲ့အတွက် အရောက်လှမ်းလာခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နော်။ ပရိုမိုးရှင်းကာလကတော့ 23 Aug မှ 30 Aug အထိ ဖြစ်တဲ့အတွက်အချိန်မှီလေးပြေးခဲ့လိုက်ပါတော့ဗျာ။ ပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်အသေးစိတ်ကိုတော့ အောက်ကလင့်ခ်ထဲမှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။https://www.facebook.com/236820356418947/posts/1972563956177903?sfn
Mudon Maung Maung2021-06-22T14:50:19+06:30September 9th, 2019|
မြို့ကြီးရေလှောင်တမံ ဘက်စုံစီမံကိန်းသည် ရှမ်းပြည်နယ် ( တောင်ပိုင်း ) ရွာငံမြို့နယ်၊ မြို့ကြီးကျေးရွာအနီးတွင်တည်ရှိပါသည်။ ထိုမြို့ကြီး ရေလှောင်တမံ ဘက်စုံစီမံကိန်းသည် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်စေရန် သာမက ရေအားလျှပ်စစ် ထုတ်လုပ်ရေး ကဏ္ဍကိုလည်း အထောက်အကူပြုလျှက်ရှိပါသည်။ ထို
Mudon Maung Maung2021-06-22T14:54:11+06:30August 30th, 2019|
ပန်းလှိုင်မြစ်သည် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး အတွင်း ၌ မဲဇလီဒလမှ ခတ္တိယရွာအထိ အလျား (၇.၅၂) မိုင်နှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အတွင်း၌ ခတ္တိယရွာမှာ ရန်ကုန်မြစ်ဝအထိ (၂၆.၆) မိုင်၊ စုစုပေါင်းအလျား (၃၄)မိုင်ကျော်ခန့် ရှိပါသည်။ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း
ပဲခူး-စစ်တောင်း တူးမြောင်း ပြန်လည်တူးဖော်ခြင်း
Mudon Maung Maung2021-06-22T14:55:17+06:30August 30th, 2019|
အဆိုပါ တူးမြောင်းသည် စစ်တောင်းမြစ်ပေါ်ရှိ မြစ်ကျိုးရွာမှနေ၍ ဝေါ၊ မင်းရွာနှင့် သနပ်ပင်မြို့များကို ဖြတ်သန်းကာ ပဲခူးမြို့တောင်ဘက် ပဲခူူးမြစ်ပေါ်ရှိ တာဝရွာအထိ သွယ်တန်းတူးပေါ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ စီမံကိန်းလုပ်ဆောင်သည့် အကျိုးကျေးဇူးကြောင့် ဒေသခံပြည်သူများအတွက် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးအတွက် စိုက်ပျိုးရေလုံလောက်စွာ ရရှိလာခြင်း၊ သောက်ရေသုံးရေ
No.83, Depeyin Wunhtauk U Mye Street
Mudon Maung Maung Auto Parts Sale Center (Taunggyi Branch)
© COPYRIGHT 2018 BY MUDON MAUNG MAUNG | ALL RIGHTS RESERVED | DEVELOPED BY MHIT